Vaovao - Ny singa sivana amin'ny fanadiovan-drano dia tsy maintsy ovaina matetika. Azo atao ve ny manohy mampiasa azy io? Ho takatrao aorian'ny famakiana
Ny singa sivana amin'ilay mpanadio rano napetraka ao an-trano dia miova matetika. Azoko atao ve ny manasa azy sy manohy mampiasa azy? Tsy tsara izany!
ho fiarovana ny fampiasana rano amin'ny ankapobeny, Mino izahay fa maro ny tokantrano nametraka mpanadio rano. Ny rano fantsakana dia mivoaka rehefa avy nodiovin'ilay mpanadio rano ary voasivana mba hadio kokoa ny kalitaon'ny rano. Ny rano amin'ny paompy dia azo diovina, amin'ny lafiny lehibe, ny trosa amin'ny singa sivana. Ny singa sivana tsirairay dia manadio ny loharanon'ny rano ary farany manakana ny loto ny loharanon'ny sivana.
Noho io antony io dia ho maloto ny singa sivana aorian'ny fampiasana maharitra, ary ho very ny fiasan'ny rano fanadiovana. Amin'ity indray mitoraka ity dia mila soloina ny singa sivana hanohy hampiasa ny fanadiovan-drano. Rehefa avy nampiasa ny fanadiovan-drano dia maro ny namana no nilaza olana, izany hoe ny vidin'ny fampiasana fanadiovan-drano hanoloana ny singa sivana dia hihoatra ny vidin'ny mpanadio rano.
Raha ny marina dia izany no izy. Ny vidin'ny fanadiovan-drano dia manodidina ny arivo ariary. Na izany aza, ny mpanadio rano dia manana singa sivana maro, singa fanivanana am-polony maro, ary elanelan'ny sivana an-jatony, ary misy singa sivana sasantsasany maharitra volana maromaro. Mila soloina indray mandeha isaky ny enim-bolana na indray mandeha isan-taona. Ny vidin'ny singa sivana miampy ny vidin'ny fanoloana ny singa sivana dia somary avo tokoa.
Nisy ny namana nanolo-kevitra fa satria lafo tokoa ny manova ny singa sivana, azonao atao ve ny mamoaka azy ary manasa azy irery ary mampiasa azy? Sasao amin'ny rano dia avereno ao indray, hisy fiatraikany amin'ny fampiasana azy ve?
Voalohany indrindra, ny firafitry ny singa sivana dia tsy tsotra araka ny eritreretintsika. Ny singa sivana dia mizara ho fitaovana isan-karazany amin'ny fanivanana ny fahalotoana lehibe sy kely. Esorinay ny singa sivana, ary ny hany azonay atao dia ny manasa ny rano ambonin'ny faritry ny sivana. Azo atao tokoa ny manasa loto sasany, saingy tsy misy vokany firy.
Ny singa sivana vaovao dia fotsy amin'ny endriny amin'ny ankapobeny, ary mety ho mainty na volontany aorian'ny fampiasana mandritra ny fotoana maharitra. Ity no adsorption ny fahalotoana sasany. Ireo zavatra ireo dia tsy afaka hosasana amin'ny fanasana rano fotsiny. Na madio aza ny atiny, tsy voatery ho ny fanasivanana Azo antoka fa mividy mpanadio rano ny tsirairay hanadio ny loharano, ary soloina ny singa sivana maloto. Raha ny marina dia mbola mandoto ny loharano.
Noho izany, ho an'ny fiheverana ara-pahasalamana sy fiarovana dia tsy tokony hanemotra ny fanoloana ny singa sivana ianao ary hanadio ny singa sivana ihany. Ny fampiasana araka ny antonony ny singa sivana dia mety hahatonga ny mpanadio rano hanadio tokoa. Ny fomban'ny fanadiovan-drano koa dia nisy fiovana lehibe koa. Ny mpanadio rano sasany dia manana fanoloana tsotra kokoa ny singa sivana. Azonao atao ny mividy ny singa sivana mba hisolo azy. Misy ihany koa fitaovana vaovao izay efa nampiasaina hatry ny ela. Raha tsy te hanova matetika ny singa sivana ianao dia azonao atao koa ny manolo ilay mpanadio rano efa taloha ao an-tranonao amin'ny iray mety.